Sawirada Taariikhda Tower Eiffel ee Paris
Yurub Faransiiska Paris
Sawirro xiiso leh ee Tower Eiffel inta lagu guda jiro Taariikhda
Xilligii hore iyo tan hadda ee "La Tour"
Blossoms Spring ee lugta of Eiffel Tower in Paris, France. © 2009 Keepwaddling1. Xuquuqaha qaar ayaa hoos imaanaya shatiga Creative Commons.
Waa adag tahay in la aamino marka Eiffel Tower in markii hore loo soo bandhigay Bandhiga Universal ee 1889, waxaa loo arkay aragti xun oo dad badan, kuwaas oo ka helay casriga aaminka ah shoog. Hadda malaayiin qof ayaa sanad walba ku soo badanaya minaaradda, labadaba dhismaha xiisaha leh iyo muuqaalkiisa cajiibka ah ee magaalada, laakiin waxaa xiiso leh in dib loo eego munaasabadaha badan ee maarada sanadaha badan. Waxaan ku bilaabi karnaa xaadirka, laakiin iska hubi inaad riixdo galinta galbeedka oo dhan si aad u aragto qaar ka mid ah rikoodhada taariikhda dhabta ah.
Sawirka Sawirka - La Tour Eiffel ee Guga: Talaalka suugaaneed ee Eiffel Tower inta lagu jiro xilliga gu'ga waxay muujinaysaa inta dadaal ee magaalada Paris ku ridayso ilaalinta beeraha hareeraha. Tani waxay dammaanad qaadaysaa muuqaalka iyo xusuusta geedaha iyo ubaxyada xilliga gu'ga.
Xaqiiqooyinka Kulul iyo Taariikhda
Makhaayadaha Eiffel Tower
Eiffel Tower Lit Up Night at sanad-nambarka 120aad
Tower Eiffel ayaa u dabaaldegay sanadguuradii 120aad ee sannadka 2009. Pascal Le Segretain / Getty Images.
Talaalkani waxa uu muujinayaa mid ka mid ah aaladaha caalamka ugu caansan ee loo yaqaan illaa dabaaldegga sanadlaha ah ee 120aad. Munaarada ayaa markii ugu horreysey lagu soo bandhigay 1889-kii intii lagu jiray Bandhiga Caalamiga ah ee Paris, laakiin guud ahaan waxaa cambaareeyay dadwaynaha iyo Gustave Eiffel. Wax badan ayaa isbedelay tan iyo markaas!
Eiffel Tower Profile iyo Guide Visitors
Muuqaalka Sunset View of Eiffel Tower iyo Landscapes Paris
Eiffel Tower waxaa lagu sawiraa qorrax dhaca. Mike Hewitt / Getty Images
Muuqaalkan dusky ee Eiffel Tower iyo farshaxanimada wayn ee hareeraha munaasabada loo yaqaano Champ de Mars ayaa sidoo kale na siinaysa aragtiyo muuqaal ah oo ku saabsan muuqaalka muuqaalka magaalada ee ku xeeran dhismaha.
Tower Eiffel ayaa tagaya Yurub
Kulanka Eiffel wuxuu ku yaallaa midabada EU-da iyo astaanta 2008-dii. Pascal le Segretain / Getty Images
Markii Faransiisku uu madaxweyne u ahaa Midawga Yurub 2008-dii, Eiffel Tower waxa uu ku yaallay midabada iyo calanka EU-da, sida lagu muujiyay tallaalkan.
Kala Qayb Qaadashada Eiffel Tower
Kulanka Eiffel waxaa laga soo toogtay xagga hoose. Bruce Bennett / Getty Images
Muuqaalkani waxa uu ka muuqanayaa Tower Eiffel ee Paris, Faransiisku wuxuu na siinayaa aragti dhow oo la xidhiidha farsamooyinka birta ah ee culus ee wakhtigaas ahaa moodhalka dhabta ah ee injineernimada. Isticmaalka birta iyo birta kale ayaa wali ku cusub dhismaha dhismaha 1889-kii, halka miinadu markii ugu horreysay ay u aragto calaamad fool xun, waxay saamayn ku yeelanaysaa dhismayaal badan iyo injineerro sannado badan ah.
Eiffel Tower in Under Construction - Circa 1878
Eiffel Tower inta lagu gudajiray dhismaheeda 1878.
Talaalkan sawir-qaadaha ee Eiffel Tower inta lagu gudajirey dhismaha ayaa la qaaday 1878-kii, marka sawir qaadku wali ahaa tiknoolajiyad isdabajoog ah. Munaarada waxaa lagu dhisay 18,038 gogo, oo ay ku jiraan 7,300 oo tan oo bir ah, miisaankeedu yahay 10,100 ton. Waxay ku taallaa 324 mitir / qiyaastii. 1,063 ft. Waxay qaadatay wadarta 2 sano, 2 bilood iyo 5 cisho si loo dhameeyo dhismaha, iyo lid ku ah caqiidada caanka ah, dhismaha mashruuca waxaa ka ahaa Stephen Sauvestre-- Gustave Eiffel wuxuu ahaa qandaraasle ahaa shaqaaleynta mashruuca.
Rinjiyeynta Tower Eiffel ee Universal Universelle 1889kii
Tixgelinta Tower Eiffel ee Universal Universelle ee 1889. Georges Garen, 1889. Doms Public.
Georges Garen ee 1889 rinjiyeynta Eiffel Tower cusub oo si qurux badan u duubay Bandhigga Caalamiga ah ee 1889-kii wuxuu siinayaa dareen macquul ah oo ka mida munaaradeeda ee Belle-Epoque Paris.
The Eiffel Tower ee Exhibit Universal ee 1900
Kulanka Eiffel Tower ee loogu talagalay Bandhigga Caalamiga ah ee 1900. Magaca Dadweynaha
Sawiradani waaxyaha ah ee loo yaqaan 'Eiffel Tower' waxaa loo qaaday munaasabadda Universal Exhibition of 1900 oo ah sawir qaade Maraykan ah William Herman Rau.
Hillaacku wuxuu ku dhuftay Tower Eiffel
Tower Eiffel wuxuu ku dhuftey iftiimid 1902. Diiwaanka dadweynaha
Circa 1902 waxay muujineysaa in Eiffel Tower in Paris ay ku dhufatay iftiin. Eiffel Tower, oo loo adeegsaday raadiyaha raadiyaha, ayaa sidoo kale lagu sharaxay inuu yahay kiciyeye shidaal oo xoog leh.
London, UK iyo Paris oo ku yaalla Toulouse iyada oo tareen, baabuur iyo duulimaad
Sahaminta Paris 'Elegant Palais Royal: Tilmaamaha Dhamaan Sawirada
Cuntada Cuntada ee 8 -da Habeen ee Paris
Saint-Denis Basilica: Tilmaamaha dhammeystiran
Ratatouille Adventure ee Disneyland Paris
Palace Hall Maxim ee Palace ee Hong Kong
Suuqa ugu wanaagsan ee beeraha ee Pittsburgh
Talooyin ku Saabsan Wadista Wadada Across ee Kanada
Seven Seas Mariner Suites iyo Habeeynta
Daawooyinka ugu Fiican Houston
4 Makhaayadaha Worth Worth Soo booqashada Monteverde, Costa Rica
Sidee loo raacaa Mumbai Tareenka Degmada
Waxyaabaha ugu Fiican ee ku saabsan ku noolaanshaha Cleveland
Saaxiibo Malacca Suxuun iyo Xagee Laga Helaa
Dib u eegida Indiana Jones Ride ee Disneyland California
5 Waxyaabaha Lagu Sameynayo Maalinta Aabaha ee Seattle
Hurtigruten Coast Liner - MS Midnatsol Cunto Sawir Sawireed
Tilmaamaha Hagaha ee loogu talagalay Camino de Santiago
Liisaska Makhaayadaha Qalabka Detroit iyo / ama Michigan